Sezvimwewo chero zvipi midziyo, mavhiripu inoda kugadziriswa nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Kugadziriswa kwakakodzera ichabatsira kuwedzera iyo upenyu a wiricheya uye kudzivirira kuti irege kuputswa. Bhenefiti hurusa yekugara uchigadzirisa pane a wiricheya iko kuita kwesachigaro. Iine zvikamu zvinoshanda zvakanaka, zvinodzora kudhonza pane iyo wiricheya uye inofambiswa nyore. Iyo daro, huwandu hwenguva, uye simba rinoshandiswa pane avo wiricheya inogona kuvandudza nekuda kwesimba rinowanzo fanirwa kuzvimanikidza kuenda kwese haingawedzere. Mobility inogona zvakare kuwedzera ichideredza kusagadzikana uko kufamba kwakadai kunogona kukonzera muviri mukufamba kwenguva sekusakara uye kubvarura kwetsandanyama.
Kuchengetedza kuri pakati pezvikonzero zvepamusoro wiricheya inofanira kugamuchira tsika maintenance. Inogona kubatsira kudzivirira zviitiko zvakaita sekunamatira, kubvaruka, kana kubvarura mavhiri akabvarura chigaro, kuwira, uye kukanganisa mabhureki. Kunyangwe munhu angangosangana nekutadza kana kushandisa a wiricheya chero nguva, vashandisi vatsva vari pakati pevakuru vari panjodzi yekusangana nekutadza nekuda kwekusaziva.
Kudzivirira chero kutadza kwevhiri, ipapo mavhiri anofanirwa kuongororwa kamwechete pasvondo kuona kuti vazadzwa ne mweya waidiwa kumanikidza kana kusabayiwa. Izvi zvichawedzera mavhiri kugona kumonera zvakasununguka nekushomeka kushoma se zvinogoneka. Kuongorora kunodzikisa mikana yekuwana vhiri rakaputika. Izvi zvinogona kuve nenjodzi uye kutora nguva kunyanya pasina rubatsiro. Kungofanana nechero mavhiri emotokari, kudhonzwa kwetambo dzevhiri kunogona kupera uye kunofanirwa kuchinjwa kana hafu yekudzika tsoka yashandiswa kusvika kumusoro, kufamba uye traction.
kana wako wiricheya inoshandisa mavhiri akasimba inofanirwa kuongororwa chero mabhureki akakomberedza mavhiri kuti ive nechokwadi chekuti vhiri rakanyatso pasi kudzivirira kutsvedza kana kumira. Kusungira kumukombero yakakosha kucherechedza futi ku kudzivirira iyo rabha kubva pakubvisa kubva pamuromo. Kana yako wiricheya ine mavhiri ekutaura zvakakosha kuti aabvumbure kuti abatsire kuona kana akasununguka kana akatyoka.
Yakavharwa mabheyari anoshandiswa mune mamwe mavhiripu, zvakadaro, vhudzi kana tambo dzemhando ipi neipi dzinogona kupinda mazviri zvichikonzera mavhiri kuita jam. Vhiki nevhiki yakacheneswa mavhiri anomhanya zvakanyanya kubudirira anounza makuru zvinobatsira kune mushandisi panyama uye hutano-huchenjeri. Pane vamwe mavhiripu, zvakakosha kutarisa maasi uye kuona kuti akacheneswa mavhiri maviri ese.
Kugara kwako kunogona kusingaonekwe se zvakakosha sekuongorora mavhiri pano neapo asi zvinoita mutsauko. Iyo chigaro haifanire kubvaruka kana kusakara nekuti inogona kutungamira kune yakaipa mamiriro. Yakatambanudzwa upholstery inogona kukonzera kusagadzikana mukufamba kwenguva uye kurwadziwa kumashure. Ongororo ingori inofanirwa kuitwa kamwe chete pasvondo mbiri nekuona chokwadi pekugara zvinhu hazvina kusununguka kana kubvaruka uye kana zvichidaro kuchitsiva nekukasira.
Kuti udzidze dzimwe nzira dzekuchengetedza yako wiricheya cheki kunze kwedu matipi pazasi: